Indlu kwiNkuni yaseValchiavenna - I-Airbnb
Indlu kwiNkuni yaseValchiavenna
San Cassiano, Lombardia, Italy
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFilippo
Indlu yethu emahlathini sisakhiwo sezitena esiqhelekileyo esalungiswa entwasahlobo ka-2019.
I-oasis yoxolo kunye nokuzola engqongwe yindalo, ilungele iintsapho okanye izibini ezifuna ukuphumla kunye nobudlelwane bothando. Umbono weentaba zeValchiavenna, ezinengca enkulu yokusetyenziswa kwegadi. Indlela yebhayisekile kumgama weemitha ezimbalwa, ukubakho kohambo oluninzi, imizuzu eli-10 ukusuka eChiavenna, imizuzu engama-30 ukusuka eLake Como kunye neValchiavenna Ski Area.
Iakhawunti ye-Instagram: lacasanelbosco_valchiavenna
Uphahla oluveziweyo lwamaplanga, iveranda yangaphandle, ejikelezwe yingca enkulu kunye neenkuni, kwindawo ezolileyo ejikelezwe yindalo.
Indawo yohlulwe ibe yimigangatho emibini. Igumbi lokuhlala elinekhitshi elivulekileyo kunye nefestile kwiveranda enomgangatho wamaplanga kumgangatho ophantsi. Igumbi elinomgangatho wokhuni, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nethafa lamatye elinombono obanzi wendawo kumgangatho wokuqala.
5.0 · Izimvo eziyi-129
Indawo ezolileyo engqongwe buhlaza, indawo yokuphumla yoxolo okomzuzwana wothando njengesibini, okanye ukuzola kosapho lwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Filippo
Sisoloko sifumaneka kulo naluphi na ulwazi kunye neengcebiso malunga nendlela yokuzonwabisa kakuhle kwiholide yakho eValchiavennna. Siyabuhlonela ubumfihlo kunye nolwalamano olusenyongweni lwabo banqwenela ukuhlala ngoxolo.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R1675